उपचारको क्रममा राजन कोइरालाको निधन कोइरालालाई कस्ले आक्रमण गरेको थियो ? - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
उपचारको क्रममा राजन कोइरालाको निधन कोइरालालाई कस्ले आक्रमण गरेको थियो ?
धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. २ का वदाअध्यक्ष राजन कोइरालाको निधन भएको छ ! भदौ ४ गते गम्भीर घाइते अबस्थामा भेटिएका कोइरालालाई को कस्ले आक्रमण गरेको थियो त्यो अझै अज्ञात छ !
रविओपीका समाज विकासका धरोहर, सामाजिक व्यक्तित्व राजन कोइरालको उपचारका क्रममा नर्भिक अस्पतालमा शुक्रबार राती निधन भएको थियो । गत बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले तर्फबाट उम्मेदवार बनेका उनले वडा अध्यक्षमा भारि मतले जितेका थिए ! रवी ओपी क्षेत्रमा राजन आँखाको नानी सरह भएर थिए । शुक्रबार राती निधन भएसँगै छर छिमेक र धुलिखेल नेगनै शोकमा डुबेको छ । कोही कसैलाई भनि नबिझाउने इमान्दारी कर्मठ व्यक्तित्व कोइरालालाई गत भाद्र ४ गते साँझ वडाकार्यालय नजिकै टाउकोमा गम्भिर चोट लागेको अचेत अवस्थामा स्थानीयले फेला पारेका थिए । स्थानीयका अनुसार सो कोही कसैले सुनियोजित ढंगबाट आक्रमण गरेको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । धुलिखेल २ रबिओपीको छाप खोल्सामा स्थानीयले भेटेका थिए । सडकमा हिडिरहेको बेला कोही कसैले आक्रमण गरेको हो या आफैं लडेको हो अहिलेसम्म कोही खुल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सहकुलबहादुर थापाले बताए । घटना के कसरी घटेको हो त्यसको थप अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेको बताएको छ ! उनको १० गते शनिबारबार पशुपति आर्यघाटमा दाह सस्कार गरिएको थियो ! उनको सवयात्रामा हजारौ काभ्रेली सहभागी थिए !
धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. २, रविओपीका समाज विकासका धरोहर, सामाजिक खम्बा राजन कोइरालको उपचारका क्रममा नर्भिक अस्पतालमा शुक्रबार राती निधन भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको राजन वडावासीको आँखाको नानी सरह भएर रहनु भएको थियो । शुक्रबार राती निधन भएसँगै छर छिमेक र धुलिखेल नेगनै शोकमा डुबेको छ । कोही कसैलाई भनि नबिझाउने इमान्दारी कर्मठ व्यक्तित्व कोइरालालाई गत भाद्र ४ गते साँझ वडाकार्यालय नजिकै टाउकोमा गम्भिर चोट लागेको अचेत अवस्थामा स्थानीयले फेला पारेका थिए । स्थानीयका अनुसार सो कोही कसैले सुनियोजित ढंगबाट आक्रमण गरेको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । धुलिखेल २ रबिओपीको छाप खोल्सामा स्थानीयले भेटेका थिए । सडकमा हिडिरहेको बेला कोही कसैले आक्रमण गरेको हो या आफैं लडेको हो अहिलेसम्म कोही खुल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सहकुलबहादुर थापाले बताउनुभयो । घटना के कसरी घटेको हो त्यसको थप अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेको बताउनुभयो । अचेत अवस्थामा छाप खोल्सामा कोइरालाहरुको कुलदेवता मन्दिर नजिक लडिरहेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
बायाँ कान काटेको सोही स्थान केही पर भागको गिदी रहने भाग हड्डीसमेत फुट्ने गरी चोट लागेको अवस्थामा भाई जगनाथ कोइरालाले राती ८ बजेतिर देखेपछि उक्त घटनाको बारेमा जानकारी भएको थियो । ७ बजे घरबाट श्रमितीले तेल लिएर चाँडै घर आउन भनेपछि वडाध्यक्ष राजन कोइराला डेरीबाट चाँडै फर्केका थिए । कोइराला एक्लै बाटोमा हिँडेका थिए । घर पुग्न करिब ५ सय मिटर बाँकी हुँदा लडेको अवस्थामा फेला पारेका हुन् । उक्त घटना कसरी घट्यो कसरी वडा अध्यक्ष कोइरालालाई आक्रमण ग¥यो त्यो भने अझ खुल्न सकेको छैन ।
तत्कालै भाई जगनाथले स्थानीयहरुलाई बोलाएर धुलिखेल अस्पताल पु¥याएका थिए । धुलिखेल अस्पतालले नर्भिक अस्पतालमा रिफर गरेपछि गत सोमबार बिहान ३ः०० बजे मात्र टाउकोको अपरेशन भएको थियो ।
२०४८ सालदेखि पार्टीमा निरन्तर सक्रिय रहेका राजन कोइरालालाई नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएकको थियो । निर्वाचनमा राजन कोईरालाले ८ सय ३६ मत प्राप्त गरेर विजयी हुनुभएको थियो । ४७ वर्षिय कोइरालाका बुबा, आमा, श्रीमती र ३ छोरा छन् । जेठो २० वर्षिय विनेश कोइराला त्रिचन्द्र कलेजमा वि.एस्सी अध्ययन गर्दै छन् । दुई छोरा राम र लक्ष्मण यसै वर्षको एसईई सकेर +२ अध्ययन गर्दैछन् । नेकपा एमाले काभ्रे लेखा आयोगका अध्यक्ष एवं धुलिखेल न.पा. वडा नं. २ का वडा सदस्य टिकाबल्लभ सापकोटाले धुलिखेल अस्पताल र नर्भिक अस्पतालमा ६ लाख उपचार खर्च लागेको र सबै भाईसाथीले जम्मा गरेर उपचार गरेको बताउनु भयो ।
उक्त रकममध्येमा नर्भिक अस्पतालमा तिर्नुपर्ने १ लाख ५४ हजार रकम धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक व्याञ्जुले अस्पताल प्रशासनर्ला भनेर छुट गराउनु भएको थियो । उक्त घटनाको घोर भर्तसना गर्दै सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कडा कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई नेकपा एमाले काभ्रेले जोडदार माग गरेको छ ।
मृतक कोइरालाको दाहसंस्कारमा उहाँको पार्थिभ शरीरमा नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटीका अध्यक्ष केशव बडाल, नेकपा एमाले काभ्रेका अध्यक्ष टोकबहादुर वाईबा, उपाध्यक्ष अशोक व्याञ्जु, सचिव नारायण पाण्डे, पनौती न.पा.का प्रमुख भिम न्यौपाने, बनेपा न.पा.का प्रमुख लक्ष्मी नरसिंह वादे, धुलिखेल वडा नं. १ र २ का निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयहरुले अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिई सहभागिता जनाएका थिए ।